Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa $ 30.000 bishiiba kaliya ka soo buugaagta Kindle.
Bishii Abriil, Forbes ayaa ka warbixisay qoraaga iskiis u sameeyay Mark Dawson. Dawson wuxuu qoraa buugaag was ku qori kara dambiyada. Laakiin, taasi maahan sheekada dhabta ah halkan. Wuu sameeyaa $ 450,000 sano ah buugaagtaas.
Waxaa jira qorayaal kale oo badan oo ka yimaada meelo dhowr ah oo bil walba ah illaa dhowr kun oo doolar bishii. Iyada oo sahlanaanta daabacaadda buuga elektarooniga ah ee Amazon, waa hubaal aagagga ay kuwa doonaya in ay galaan boggooda waa in ay eegaan.
In kasta oo aadan awood u yeelan karin inaad had iyo jeer saadaaliso intaad ku sameyn laheyd boqortooyooyinka, mid ka mid ah furayaasha si aad lacag ugu uruuriso bartaada blogka ayaa ah inaad abuurto durdurro badan oo dakhli oo laga helwan kilo.
Mid ka mid ah waxyaabaha quruxda badan ee ku saabsan barta blogka waa inaad bilaabi doontaa inaad ururiso waxyaabo badan oo waqti ka badan. Waxaad si sahlan u bilaabi mapa in aad kala soocdo sheekooyinka ku jira qaybaha oo ay ku wada xidhaan hagayaal en buugaag.
Dooro mowduuc. Tusaale ahaan, haddii aan rabay inaan xiro qaar ka mid ah fariimahayga ku yaal Guriga Caruurta, waxaan dooran karaa mawduuca "Macmacaanka glutenvry". Waxaan markaa ka raadin karaa koobab ku saabsan qaybtaas, fiiri waxa soo baxay, so kan jy jou inuu ku daro dhowr ka mid ah kuwa u gaarka ah en y talooyin qaar akhristayaasha oo ku dhejiya buug loogu talagalay Kindle.
Ka faa’iidaysiga dardargalinta isdhaafsiga. Blogkaagu waa inuu ahaadaa waddo laba dhinac ah. Waxaad kor u qaadi doontaa buugaag aadna u diri mapa gaadiidka Amazon si aad u iibsato nuqul. Kuwa buuggaaga ku qoran Amazon waxay akhrinayaan waana in ay helaan xiriirka enyo booqdaan bartaada.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad bixiso buug gaar ah, waxaad mararka qaarkood qabsan kana niche in qofna uusan horay u qorin iyo inuu helo dhageystayaal cusub labadaba buugtaada enyo bloggaaga.
Waqti ku bixi inaad ku baarto buugaagta la heli karo ee mawduucaaga ah. Maxaa aan la daboolin? Maxaad ku van lahayd?
Waxaad sidoo kale qaadan kan suaaalaha akhristayaasha ee ku yaala goobta oo isticmaal su’aalahan fikrad ahaan si aad u qorto buug cusub.
Waxaad u baahan doontaa inaad sameyso xisaab si aad ugu daabacdo Kindle op Amazon. Hase yeeshee, furashada xisaabtu waa bilaash.
Marka ay timaado ebooks, qaabka ugu fudud ayaa ka sii fiican. Isku dag inaad ku dhejiso font aasaaska ah oo ka fogow wax kasta oo wata qoraal ama muuqaallo. Haa, xitaa cinwaanka. Kaliya het iyo jeer uma tarjunto si fiican qaab ebook ah.
Ilaa aad qoreysid buug carruurta, iskuday inaad ku dhejiso qoraalka. Marka hore, haddii aad doorat ikhtiyaarka 70% ee daqligaaga (binnekant oo ku saabsan tan daqiiqad gudaheed), waxaa lagugu soo dallaci doonaa side buuggaagu u weyn yahay. Sawirraduhu wey sii ballacayaan faylka.
Dhammaadkii bishii Juun، ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa $ 30،000 bishiiba kaliya